Ebe nchekwa Archive Maynooth - IntoKildare
Kwụsị site na ọmarịcha Maynooth dị na north County Kildare, chọpụta ọmarịcha Mahadum Maynooth hiwere na narị afọ nke 18 wee gafee n'ogige ụlọ akwụkwọ ya mara mma. Zute anụmanụ ndị mara mma na ezinụlọ Clonfert Pet Farm enyi na enyi, ma ọ bụ daa site na Castletown House dị nso ma jupụta na ihe owuwu nke ọmarịcha obodo obodo Palladian a.
Maynooth bụ naanị mahadum Ireland na etiti agụmakwụkwọ na nyocha. Maynooth Castle na -akwado akwụkwọ ya n'otu njedebe nke obodo, yana ụlọ Carton nke narị afọ nke 17 na nke ọzọ - oche mbụ nke ndị Dukes nke Leinster. Obodo taa bụ obodo na -eme mkpọtụ na obodo ụmụ akwụkwọ nwere ọtụtụ ije, cafes, ebe nri na ihe ị ga -eme.
Maynooth bụ ebe nkwụsị dị mkpa na Royal Canal maka ụgbọ mmiri tupu e wuo ụgbọ okporo ígwè na 1847. Enwere ike ịnweta Royal Canal Greenway, 130km nke ije na ụzọ okirikiri site na Maynooth na ọ bụ ụzọ zuru oke iji ruo Kilcock, ọwa mmiri- n'akụkụ obodo wee gafee na obodo Moyvalley na -enweghị nkọwa.
Arts & Omenala Adventure & Ihe Ihe nketa na akụkọ ihe mere eme Outdoors Ịzụ ahịa Onye na-agba ịnyịnya Kildare
Pubs & Ndụ abalị ụlọ oriri na ọṅụṅụ Cafes Ndị na-emepụta
ulo Hotels Bed & Breakfast Isiri onwe nri Maa ụlọikwuu Kildare
17 nsonaazụ (s)
Berslọ Barberstown bụ ụlọ nkwari akụ nke mba anọ na nnukwu ụlọ nke akụkọ ihe mere eme 13th narị afọ, naanị 30 nkeji si Dublin City.
Justlọ Carton bụ naanị ebe dị nkeji iri abụọ na ise site na Dublin na mpaghara 1,100 nke ala ndị ọbịa, na Carton House.
Golf Cartlọ Golf
Dị na Maynooth, Golf House Golf na-enye nkuzi golf abụọ na-agba bọọlụ, Montgomerie Links Golf Course na O'Meara Parkland Golf Course.
Ubi ugbo Clonfert
Ezigbo ụbọchị na-atọ ọchị maka ezinụlọ nwere ọrụ dịgasị iche iche gụnyere njem nlegharị anya na ọrụ aka na-arụ ọrụ ugbo.
Ogige Ugwu Donadea
Donadea na-enye ọtụtụ njegharị maka ọkwa niile nke ahụmịhe, site na mkpagharị dị mkpirikpi nkeji 30 n'akụkụ ọdọ mmiri ruo ụzọ ụkwụ 6km nke na-ewe gị gburugburu ogige ahụ!
Ụlọ nkwari akụ Glenroyal
Starlọ nkwari akụ 4 nwere oke ọdọ mmiri na ebe ezumike, yana mmemme ụmụaka na nhọrọ iri nri dị ukwuu.
Ogige Maynooth & Ebe obibi ọgbakọ
Ebe obibi dị mma na mbara ala akụkọ ihe mere eme na obodo mahadum Maynooth. Dị mma maka ịgagharị Royal Canal Greenway.
Agụmakwụkwọ Golf nke Moyvalley
N'ịbụ nke Darren Clarke kere, Moyvalley Golf Club bụ ebe obibi maka usoro 72 kwesịrị ekwesị maka ọkwa golf niile.
Ebe a na-eme golf mara mma nke dị na ụlọ ọgbara ọhụrụ, ụlọ nke narị afọ nke 19 na mgbakwunye ụlọ.
Ọwa mmiri Royal Canal
Greenest kachasị ogologo na Ireland na-agbatị ruo kilomita 130 site na Ancient East nke Ireland na Ireland nke Zoro ezo Heartlands. Otu ụzọ, nchọpụta na-enweghị njedebe.
Dalọ ahịa Shoda Market
Nnukwu nri dị mma nwere mgbagọ pụrụ iche ọ lụrụ nke nwere ọmịiko na ije ozi onwe onye.
Ndị K Club
Klọb bụ ụlọ ezumike mara mma nke obodo, nke gbanyere mkpọrọgwụ n'ụlọ akwụkwọ ochie nke Irish n'ụzọ dị jụụ na enweghị nchekwube.
The Palmer Golf Courses - Klọb
Starlọ oriri na ọ Starụ 5ụ XNUMX Star K Club & Golf Resort bụ otu n'ime ụlọ ịgba chaa chaa kacha mma na Ireland na otu n'ime golf golf kacha mma na Ireland, nke otu n'ime ndị egwuregwu kachasị egwu na akụkọ ihe mere eme, Arnold Palmer mere.
Telọ Tea nke Victoria
Achịcha nri na achịcha dị iche iche nke ntọala ụlọ narị afọ nke 18.
IntoKildare © 2021 - Site site na zuru oke | amụma nzuzo